China Yakasimba uye yakatwasuka yemishenjere zvinhu rusvingo chakatarisana paneeli Kugadzira uye Fekitori Goridhe Bamboo
Bamboo chinhu chakasimba kwazvo pachifukidzo chefaçade. Iwo emabhodhi ekuputira mabhodhi akanaka uye ane chitarisiko chakanaka. REBO® bamboo madziro ekufukidza mapaneru akamboita moto unodzora Kirasi C, zvinoreva kuti bhodhi harisi nyore kubata moto. Pane zvakawanda zvakanakira iyo yemishenjere yekufukidza zvinhu:
Miti yemishenjere inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa nemukati meimba, uye yakakamurwa kuita yemukati yemishenjere uye yekunze bamboo zvinoenderana nenzvimbo yayo huru yekushandisa. Zvinoenderana nenzvimbo yaro, inonyanya kushandiswa pamadziro emadziro, pasi uye masiringi akamiswa. Huru hukobvu hwe wallboard ndeye 12mm uye 18mm. Iyo inorema yemishenjere emadziro emadziro chigadzirwa chakagadzirwa neakasarudzika ekumusoro kurapwa pahwaro hwekunze inorema bamboo bhodhi.
Bamboo madziro akafukidza ndicho chigadzirwa chakawedzerwa kubva patambo yakarukwa yemishenjere, ine hunhu hwayo hwakazara, yakasimba kwazvo, yakasimba kwazvo, kuomarara kwakanyanya, yakaderera formaldehyde emission (E1 European standard). Bamboo madziro emadziro ane diki yakaoma shrinkage uye kuzvimba mwero, hazvisi nyore kuumbika, anti-ngura, isina mvura uye mamiriro ekunze kusagadzikana. Iyo ine kugadzikana kwakasimba, uye yakapasa iyo 72-awa yekubika bvunzo bvunzo. Inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kwemadziro edzimba, mahotera uye makirabhu. Anorema bamboo emadziro emadziro zvakare anozivikanwa kwazvo mune yakashongedzwa gadheni kushongedza, nekuda kwenzvimbo-inoshamwaridzika, hutano hunhu.
1) Kuonekwa kwechisikigo uye kwakanaka
2) Yakasimba kwazvo, yakagadzikana uye yakasimba
3) Kupisa moto (Kirasi B)
4) Very yakatwasuka uye inogara kwenguva refu
Pashure: Yakasimba uye kuwanda kabhoni yakashongedzwa yemapuranga ekunze
Bamboo Yakatarisana Cladding Panel
Strong uye arambe achirema carbonized yemishenjere panze fl ...
Hot kumanikidzwa hwakanaka yepamusoro panze rinorema yemishenjere ...
E1 Eurpean mureza Eco-ushamwari yemishenjere floorin ...
Rima Ruvara hapana deformation yemishenjere yekucheka bhodhi
Easy kugadzwa shinda dzakarukwa yemishenjere panze f ...